Alvaro Morata oo ka hadlay mustaqbalka Antoine Griezmann ee kooxda Atlético Madrid – Gool FM
Alvaro Morata oo ka hadlay mustaqbalka Antoine Griezmann ee kooxda Atlético Madrid
Dajiye March 21, 2019
(Spain) 2 Maarso 2019. Weeraryahanka reer Spain ee Alvaro Morata ayaa daaha ka qaaday mustaqbalka xidiga reer France Antoine Griezmann iyo xaqiiqda ah inuu ka tagayo kooxda Atlético Madrid, marka uu furmo suuqa kala iibsiga ee xagaaga ee soo aadan.
25 jirka reer Spain ayaa shir jaraa’id uu kasoo muuqday kahor kulanka ay wada ciyaari doonaan xulalka Spain iyo Norway wuxuu kaha hadlay mustaqbalka Antoine Griezmann ee kooxda Atlético Madrid.
“Antoine Griezmann wuxuu sii joogi doonaa Atletico Madrid, wuu ku faraxsan yahay halkaan, isagu waa laacibkeena, waa xidiga kooxda”.
“Kooxda iyo jamaahiirta way garanayaan wayna jecel yihiin, waxaan u maleynayaa inuu sii joogi doono, sababtoo ah wuxuu ku sugan yahay gurigiisa”.
Si kastaba waxaa jiray warar xan ah oo dhowaan soo baxayay, kuwaasoo sheegayay in 27 jirka reer France ee Antoine Griezmann uu ka tagayo kooxda Atlético Madrid, kadib markii ay isaga soo hareen tartanka UEFA Champions League.
FA-ga England oo shaaca ka qaaday in Alexander-Arnold laga saaray liiska xulka qarankiisa England, sababo la xiriira....
Lacagaha ay kooxda Barcelona doonayso inay kula soo wareegto weeraryahan Luka Jovic oo daaha laga rogay